I-laser eyenziwe ngokwezifiso ze-ceramic alumina substrate China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Ceramic Substrate > I-laser eyenziwe ngokwezifiso ze-ceramic alumina substrate
I-Laser yokusika i-ceramic alumina substrate
Ukuze uthole ukuklanywa nokuklanywa okulinkimbinkimbi embonini kufakwe, ukusika kwe-laser kuyinkimbinkimbi ephakeme kakhulu yokucubungula okusezingeni eliphezulu le-ceramic alumina substrate eyindlela ephakeme kakhulu yokukhiqiza kunokwenziwa kwe-CNC.
Siphi ikhono esinalo? Iyiphi izinga elingatholakala emva kokusika kwe-laser, ubheke lokhu okulandelayo:
-Ubukhulu bokutholakala kwemiklamo ehlukene -Ukusika kwekhasi kuhlanganiswe nokutholakala kwe-CNC maching
- Max. usayizi wokusika: 152 x 152mm -Ukuqonda okunembile okufinyelelwe: +/- 0.02mm
-Ukusebenzisa amaminithi. ukuphakama kokuvula: 0.1mm - uMax. ukusika ubukhulu: 1.5mm
-Ukukhiqiza ukukhiqizwa kwamandla amaningi
Lezi zingxenye eziphakeme kakhulu ze-al2o3 ceramic substrate ezisetshenziselwa kakhulu njenge-plining plate, ibhodi lesifunda elisezingeni elilodwa, ipulethi yoceramic ephathekayo, ipuleti yensimbi ye-ceramic, noma i-DBC.